20.000.000 CHIPS ရရှိစေမည့် Immortal Ankylosaurus ကိုအနိုင်ရရန် ထိပ်တန်း DINO KING 16/01 - 18/01
| ကြည့်ရှု့သူ: 77
Live777 မှ Dino King သည် သင့်အား 3D ဂရပ်ဖစ်ပုံရိပ်များ၊ အသံသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဒိုင်နိုဆောအမဲလိုက်နေရာများနှင့်အတူအလွန်ကောင်းမွန်သောခံစားမှုကိုရရှိအောင်ဆောင်ကြဉ်းပေးပါလိမ့်မည်။ သင်ဘာစောင့်နေတာလဲ! ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ဂိမ်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ထိပ်တန်းပြိုင်ပွဲကိုမြန်မြန်စူးစမ်းပါဝင်လိုက်တော့နော် !
- အချိန် - 0h00AM နာရီ 16/01 မှ 11h59PM နာရီ 18/01/2022 အထိ
- အကြောင်းအရာ - Dino King Immortal Ankylosaurus ပစ်ခြင်းတွင် သင်ပါဝင်သည့်အခါ Dinosaur Immortal Ankylosaurus အများဆုံးအနိုင်ရရှိခြင်းမှ CHIPS ကိုရရှိသောထိပ်တန်းကစားသမား 10 ဦးကို ဆုချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်။ သင်ပိုမိုချစ်ပ်များများရလေ ဆုရရှိရန်အခွင့်အရေးပိုရလေဖြစ်သည်။
- ဆု -
ပထမဆု - 5.000.000 Chips
ဒုတိယဆု - 3.000.000 Chips
တတိယဆု - 2.000.000 Chips
စတုတ္ထမှ ဒသမဆုများ - 1.000.000 Chips
မှတ်ချက်။ ။ ပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားသည် nick နှင့် spam များဖန်တီးပြုလုပ်ထားသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါက အက်မင် သည် ထိုကစားသမားကို ပြိုင်ပွဲဝင်စာရင်းမှဖယ်ရှားပါလိမ့်မည်။ အက်မင် ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်
ပံ့ပိုးရန်လိုအပ်သောမေးခွန်းများ၊ တိုင်ကြားချက်များကို Fanpage (သို့မဟုတ်) Hotmail support@live777.com